Gabar Wasiir kasoo noqotay Maamul goboleed kuyaala Somalia oo Mareykanka xil ka qabatay | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Gabar Wasiir kasoo noqotay Maamul goboleed kuyaala Somalia oo Mareykanka xil ka...
Gabar Wasiir kasoo noqotay Maamul goboleed kuyaala Somalia oo Mareykanka xil ka qabatay
Wasiirkii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska maamulka Puntland Anisa Xaaji Muumin, ayaa xil sare oo muhiim ah ka qabatay maamulka gobolka Soomaalida Mareykanka ku badan tahay ee Minnesota .
Anisa Xaaji Muumin ayaa loo magacaabay in ay noqoto gudoomiye kuxigeenka arrimaha socdaalka iyo qaxootiga ee gobolka Minnesota, waxa ayna si gaar ah anisa isha ugu heyn doontaas saameynta ay soogalootiga ku leeyihiin dhaqaalaha gobolka Minnesota.
Gabadhan Soomaaliyeed ee jagada sare looga dhiibay gobolka Soomaalida Mareykanka ku badan tahay ayaa halkaasi ku nooleyd ku dawaad 5-sano, Anisa ayaana ah gabar aqoonyahan sidoo kale ganacsiyo kasoo shaqeesay.
Anisa waxaa loo magacaabay in ay hoggaamiso xafiis cusub oo dowladeed oo ka caawin doona soogalootiga iyo qaxootiga in ay shaqo helaan ama ay bilaabaan ganacsi ay iyagu leeyihiin si ay noloshooda u maareeyaan
”Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan howshan qabto, waa howl aan aaminsanahay inaan ka soo bixi doono,intaanan aniga Soomaaliya u ambabixin oo wasiirka la ii magacaabin, qorshahayga markaan maamulka dowladda baranayay waxa uu ahaa inaan halkan ka qeybqaato siyaasadda.” ayey tiri Anisa Xaaji.
Anisa Xaaji Muumin ayaa intii u dhaxeysay sanadkii 2014 ilaa 2017 waxa ay Wasiirka Horumarinta haweenka iyo arimaha Qoyska kasoo noqotay maamulka Puntland uu xiligaasi Madaxweyne ka ahaa Cabdiweli Gaas.
Previous articleXog: Saraakiil is-hortaagay dibadbax lagu taageeri lahaa Farmaajo oo Muqdisho lagu xiray
Next articleXog: Abaabulka mooshin ka dhan ah Cabdi Xaashi oo ka socda Muqdisho
Xildhibaan shaaciyay degaano uu ku wajahan yahay Ayaxa
Wasiir ka goostay Jubaland oo isagoo Xamar ku sugan maamul u magacaabay Gedo
Wararkii ugu danbeeyay Ku dhawaad 10 ruux oo ku dhintay Qarax ka dhacay Addis Ababa
XOG:Madasha iyo Madaxtooyada oo ku kala aragti duwan Shirka Farmajo, Sh.Shariif & Xasan Sh.
Denmark Oo Sheegtay In Khasab Lagu Soo Masaafurin Doono Qaxootiga Soomaalida Aan Sharciga Lahayn
DHAGEYSO: Sidee Shacabka Reer Muqdisho uga falceliyeen Talaalabadii Bandowga ee lagu soo rogay?
Itoobiya oo lagu soo dejiyay Qorshe casri ah oo loo maamuli karo shidaalka Somalia
Madaxweyne Qoor-Qoor oo Ku faanay in muddo kooban Galmudug ku gaartay 7-waxqabad.
SAWIRO” Madaxweyne Farmaajo oo lagu soo dhaweeyey dalka Eritrea